Maxamed Cabdi “Gandi”: Haldoor kaloo God u hoydey - WardheerNews
WQ. Maxamed Daahir frax
Guusha u horseeda
Geedkaa ha go’o!
Abwaankii waddaniga ahaa, Xuseen Aw Faarax Dubbad, ka mid ahaa aabbayaashii hal-abuurka fanka iyo suugaanta Soomaalida, markuu ku muusoonayey erayada kor ku qoran, oo dhextaal u ahaa heestii caanka ahayd ee ay qaadi jireen Maxamed Saleebaan iyo Hibo Maxamed, abwaanku wuu garwaaqsanaa ‘geeridu’ in ay xaq tahay. Hayeeshee wuxuu jeclaystay geeridu inay ka warwareegto ‘geesiga’ u guntan ‘guusha’ dalkiisa, micnaha, samataliska u heellan daryeelka danta guud. Dareenkaas Xuseen ka tarjumayey ku la mid ah ayaa igu dhalanayey mar kastoo la iiga war-keeno geerida lama-filaanka ah ee ‘geesi’ ka mid ah haldoorkii ku hawllanaa horseedka samaha. Damqasho gaar ahaaneed waxaa igu dhalisa geerida maskax-maalka horyaalka ah iyo hal-abuurka samataliska ah, kuwaas oo waaydan danbe geeridoodu noqotay sidii tusbax go’ay!
Barfasoor Gaandi Waxan isla soo marnay jid dheer oo qodxa badan: waxan isku soo gaarney ardaynimo dugsigii Jamaal Cabdinaasir, xilligii ay maamuli jirtey Dowladda Masar; waxan wada asaasnay ururro kala nooc ah, tusaale ahaan Ururka Tubta Nabadda (Peace Line) oo aan ku wada asaasnay Paris (France) asagu fikraddiisa lahaa asagana aan u doorannay Guddoomiye; waxan iska kaashannay wargeysyo uu ugu caansanaa warageys-cilmiyeedka caalamiga ah ee Hal-abuur; waxaan qurbajoog ku wada noqonnay qaaradda Yurub. Waxan halkaas ka wada billownay halgan-maskaxeedkii intii damqanaysey u tafa-xaydatey sidii loo badbaadin lahaa jiritaanka ummadda Soomaaliyeed, kolkii uu dhexda ka jabay tiir-dhexaadkii qaranimadu bilashadii sagaashannada qarnigii tagey. Waxan kala joogney laba dal oo daris ah: Ingiriiska iyo Faransiiska. Taasi waxay noo fududaysay is booqashada iyo talo-wadaagga. Waxan xusuustaa marar badan oo uu saqda dhexe telefoon hurdada igaga salalin jirey umalka iyo tiraanyada ka haysa burburka lagu gubey dalkii aan u dhalannay iyo darxumada ay ku suganyihiin dadkii aan ka dhalannay. Waa xanuun na wada damqayee markaasaa waagu noogu baryi jirey tawaawac iyo talo-wadaag aan ku hadaaqi jirney waxa an ka qaban karno iyo tallaabooyinka nala gudboon.
Annagoon itaal hayn ayaan isu kala diri jirney hawlo tankayaga ka weyn: diyaarin iyo faafin qoraallo kala duwan; isla baadi-goob waxgarad an is kaashan karno; abaabul kulanno iyo shirar kala nooc iyo kala heer ah, iwm. Ka sokow kulannadaas Soomaalida dhexdeeda ah, waxan Gaandi si joogta ah uga wada qaybgali jirney oo ku kulmi jirney shirar caalami ah oo ujeedkoodu ahaa xal-u-raadinta burburka Soomaaliya iyo daminta dagaalkii ka holcayey. Shirarkaasi waxay isugu jireen kulan-cilmiyeedyo aqoonyahanku ku soo bandhigaan diraasado laga soo shaqeeyey iyo shir-weyneyaal siyaasadeed. Dhawr sano waxaan si wadajir ah UNESCO lataliyeyaal caalami ah uga ahayn kulanno iyo barnaamij-dhaqameed lagu magacaabi jirey ‘Towards a Culture of Peace in Somalia (U horseedka dhawan nabadeed oo lagu xasiliyo Soomaaliya)’. Shirarka siyaasadda labadii ugu caansanaa, ahaana labada keliya ee mira dhalay, labadaas oo kala ahaa Shirweynihii Carta iyo kii ku caan-baxay Embgatti, waxay ahaayeen labada aan Barfasoor Gaandi ku wada qaadannay waqtigii ugu dheeraa. Shirweynihii Carta unuggii ugu horreeyey ee saldhigga u noqday, kaas oo ahaa shirkii Latashiga Aqoonyahannada (Intellectual Consultative Symposium) ayaa Gaandi iyo aniga noo noqday fursad aan si qota-dheer isugu sii baranno. Waayo waxaan labadayadu ka wada mid ahayn farsameeyeyaashii falkinayey fikradaha laga ambaqaadayo. Ka dibna dowladdii shirkaas ka dhalatay waxaan ka wada mid noqonnay masuuliintii loo igmaday hawlgalinta iyo hirgalinta dowladdii dib loo yagleelay. Waa halkii uu ka soo billaabmay taxanihii xilalkii kala duwanaa ee Maamed Cabdi “Gaandi” uu ka soo qabtay dowladihii Soomaaliya bubruka ka dib dhismay.
Madaale. Wuxuu ahaa madaale nolol-maalmaaddiisa ku dhammaysta xusul-duub, dadaal mintid ah. Wuxuu ahaa madaale wixii uu u dhaqaaqo aan ka harin ilaa uu ka niib-keeno; ilaa uu ka gaaro yoolka ugu sarreeya. Tusaale ahaan, i) Billowgii noloshiisa wuxuu ku mintiday waxbarasho. Kama daalin ilaa uu gacanta ku dhigay shahaadada ugu sarraysa tacliinta qorshaysan: doktooraat ama PhD cilmiga dhulka (geology). Waliba halkaas kuma nasane wuu sii xusul-duubay, ilaa uu soo hooyey PhD labaad (culuunta taariikhda iyo dhaqannada bulshooyinka). ii) Ka dib wuxuu u dhaqaaqay cilmi-baaris madaxbannaan iyo qoraal-curin. Mintidkaasna maalin kamuu nasan ilaa uu dibadda soo dhigay 12 buug iyo ilaa 50 qoraal-cilmiyeed oo uu ummaddiisa iyo adduun-weynahaba kula wadaagayey aqoontii uu kasbaday. iii) Xusul-duubkiisii saddexaad, qaranjabkii Soomaaliya kolkii uu ku qarracmay wuxuu dhexda u xirtay sidii dib loogu soo celin lahaa dowladnimadii Soomaaliya, sidii aan kor ku soo tilmaamay. Taasna maalin qudha kamuu nasan ilaa uu indhaha saaray calankii Soomaaliya oo dib hawada loogu suray magaalada Carta, Jabuuti 2000. iv) Halkaas ayuu ka billaabay xusul-duub afraad. Markaan wuxuu beegsaday badweynta siyaasadda. Wuxuu go’aansaday inuu ka qayb-qaato hoggaaminta dalka. Waxaa la malayn karaa ujeedkiisa weyn in uu ahaa u adeegga danta guud, sidii uu hore u aamminsanaa. Wuxuu mar ii carrabbaabay in uu is yiri hoggaaminta dalka markaad dad kale u deysey waa tay jar ka tureen, ilaa imminkana hoggaan la mahdiyo la la’yahaye, markaan cidna ha ku hallayn e adigu u tafa-xaydo. Taasna mintidkii uu u galay waa kii jaranjarta xilalka marba kor u sii tafayey: xildhibaan, danjire, Wasiirka Gaadiidka, Wasiirka Gaashaandhigga, kwd. Ugu danbayntiina, asagoo sii higsanaya fiiqa ugu sarreeya (hoggaamiyaha dalka/ Murashax madaxweyne) waa tan ka joojisay tii Alle. Yaa og, lagaba yaabe in uu noqon lahaa kii ku habboonaa ee sugitaankiisu ummadda ku dheeraaday!
Samatalis. Waa kan qodobka Gaandi qayrkiis kaga mudh-baxay. Dhammaan sifooyinkaas uu lahaa hadday Soomaalida maanta badankoodu u adeegsadaan dano gaar ahaaneed, asagu wuxuu ku dadaali jirey in uu uga faai’deeyo danta guud. Waxbarashadii uu ku mintiday, cilmibaaristii uu ku daaley, qoraalladii uu ku dhabar-jabay, siyaasaddii uu isku maqiiqay, xilalkkii uu ka soo xasiliyey, intaba wuxuu ka ilaaliyey in uu dhanka xun u adeegsado, ama dano shakhsi ah ku kobo, sida ay yeelaan Soomaali fara badan oo shahaadooyin waaweyn ku raran. Sida ay ka marag-furi karaan dadkii aqoonta fiican u lahaa, Maaxamed Cabdi “Gaandi”, in kastoo aan qof aadmi ah goldaloolo laga waayi karin, shaki kuma jiro hammigiisa weyn in uu ahaa “waari mayside war ha kaa haro” — inta aad nooshahay, naftaada uun ha u noolaan ee ku dadaal inaad qabato wax dhaxal u noqon kara dalkaaga, dadkaaga iyo dunidaba. Waa sababta uu kula baxay Gaandi. Horaa loo yiri “Magac bilaash kuma baxo”. Bilaash looguma magac-darin halyeygii caalamiga ahaa, Mahatma Gandhi, geesigii Hindiya ka xorreeyey gumeysigii Ingiriiska, ku xorreeyey indheergaradnimadiisa, adkaysigiisa iyo aamminsanaantiisa wanaagga guud, aamminsanaan ka sara martay dan qofeed iyo damac shakhsi ah.